Abazalwana abambalwa i-Belfast FSX kunye neengxaki ze-P3D
umbuzo Abazalwana abambalwa i-Belfast FSX kunye neengxaki ze-P3D
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #837 by Dariussssss
Ngamafutshane, i-AP ayisebenzi ngokupheleleyo. Ukuphakama, ukuhamba kunye nokukhawuleza kubambekile, kodwa akulandelanga indlela yeGPS nonke. Yonke into ibonakala ilungile, iindiza ezintle.
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #838 by Gh0stRider203
ngaba uyibeke kwimodi yeGPS? I-LOL Idk zeziphi izitshixo ozilungiselele ukuba xa kungenakho utshintsho kodwa kwiMay, nguCtrl Shift N
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #839 by Dariussssss
HAY Gh0st, yintoni na?
Ngaba konke kulungile. Kwi-AP yona ngokwayo, ngumtshintshi, ngoko, akunakwenzeka ukuba kube lula kunoko.
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #840 by Gh0stRider203
kakuhle, ke susela umatshini wakho lol
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #841 by Dariussssss
Haha .... ehlekisayo kakhulu.
Lol..yeah, ukuba idiot mhlawumbi yayiphakamileyo xa yayichukumisa i-AP ....
I-1 unyaka we-6 iintsuku ezidlulileyo #938 by DRCW
Hlola iFayile yeCFG kwi-autopilot yecandelo, ukuba awukwazi ukufumana ingxaki apho, zama ukufaka enye i-autopilot CFG, okanye ukongeza uguqulelo lwe-Nav / GPS ukusuka kwelinye idiza njenge-2D uphinde uyongeze yakho ifolda yecala